CIA VS. CPA - Yikuphi Certification kuyinto Better? [It's a Close Call]
CIA vs CPA: Yikuphi Certification Kungcono kuwe?
23 Aug CIA vs CPA: Yikuphi Certification Kungcono kuwe?
Posted at 22:50h e Alternate Articles ngu Bryce Welker, CPA 1 Comment
Kuyinto umbuzo olukhohlisayo ukuphendula: Kufanele ube Certified uMcwaningi Mabhuku Yangaphakathi (CIA) noma esiqinisekisiwe womphakathi (CPA)? Bobabili bahlonishwa izifakazo professional leyo ngcono amakhono akho nokuthuthukisa career yakho, kodwa ingabe ukhethe indlela? Masiqale ngokwenza uyayidiliza lokho sokuqinisekisa ngamunye kuzodinga ngezilinganiso zesikhathi ukuzibophezela, umzamo, kanye nezindleko.
CIA vs CPA: Certification Izidingo
CIA vs CPA: I ukuhlolwa
CIA vs CPA: Imiholo
Certified Public Accountants kulindeleke ukuba enze imisebenzi yabo ngobulungiswa. Kungani? Ngoba bazi ukuthi banesibophezelo imisebenzi kokwenza ezihlobene ezimali yomphakathi nokubika kwezezimali, ezifana ukulungiselela Isitatimende sezimali, ukulungiselela intela, futhi urekhode ngokugcina-bonke ngokuhambisana ikhodi lwezimiso. CPAs kuthiwa abantu kuvunyelwe kuphela ngokomthetho ukuze ungene futhi athumele izitatimende zezimali IRS. Ukuze ube CPA Uzodlula notorious CPA ukuhlolwa ukuthi zaphathwa AICPA. Siqukethe 4 izingxenye: Accounting kanye nokuhlola, Ibhizinisi Wezemvelo Nemithombo Concepts, Lwezezimali Accounting ukubikwa, and Regulation.
Ukuze ube CPA Uzodlula notorious CPA ukuhlolwa ukuthi zaphathwa AICPA
Certified Yangaphakathi mabhuku ukugxila pheze kuphela enza ukubalwa kwezimali kwangaphakathi of ezezimali inkampani kanye nabaqondisi yangaphakathi. CIAs Ungase futhi enze ukuhlolwa kwamabhuku kolwazi izinhlelo, ukuhambisana nezinye yezifiso yangaphakathi ukhiye. Lena indima ukuthi kudinga ukuthi wena ube njalo futhi bathobele izimiso zokuziphatha okusezingeni eliphezulu. Njengekheli CPA, ukuba abe CIA kumelwe aphumelele ekuhlolweni. CIA ukuhlolwa iqondiswa yi-Institute of Internal mabhuku (IIA) futhi siqukethe 3 izingxenye: Ibhizinisi Ulwazi for nokuhlola kwangaphakathi, Ngokusetshenziswa Auditing Yangaphakathi, futhi Essentials of Ukucubungula amabhuku ezimali Yangaphakathi. Ungafunda okwengeziwe engcono CIA PrEP izifundo lapha.
Ukuze ube CIA, kumelwe ihlangabezane nalezi zimfuneko ezilandelayo:
Ingabe wathola degree oneminyaka emine post-yesibili kusukela inyuvesi egunyaziwe. (Lokhu kungaba shintsha ngolwazi lomsebenzi; noma iminyaka emihlanu lomsebenzi kuhambisana iminyaka emibili esikole post-yesibili, noma iminyaka eyisikhombisa eliqinisekisiwe umsebenzi nokuhlola.)
Iminyaka emibili eliqinisekisiwe umsebenzi audit isipiliyoni (iziqu zeMasters kungaba ithathe unyaka owodwa)
Dlulisa 3-ingxenye CIA ukuhlolwa
Khokha zonke osebenzayo isicelo futhi ukuhlolwa izimali
Thumela Ifomu Character Izikhombo esisayinwe CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA, noma umqondisi umsebenzi wakho
Vumelana bathobele Ikhodi le IIA sika Yokuziphatha
Nikeza ubufakazi ukuhlonza
Isikhathi esidingekayo ukuze abe CIA siyahluka kakhulu, esekelwe ongakhetha eziningi zokuhlangana imfundo / lomsebenzi izidingo. Uzodinga 4 iminyaka ekolishi ukuze uthole undergraduate degree yakho. Khona-ke kuyodingeka 2 neminyaka evunyiwe isipiliyoni somsebenzi, okuletha selilonkhe 6 iminyaka. IIA ivumela 4 kudlule iminyaka ukuhlolwa (okuyinto Ubuye aphansi kakhulu pass rate), ngakho-ke kungathatha wena 10 iminyaka kuba eqinisekisiwe. Ukuze Iba CPA, kumelwe ihlangabezane nalezi zimfuneko ezilandelayo:
Ukuhlangabezana nezidingo zemfundo kanye nesipiliyoni U.S. esimweni lapho uya ilayisensi. Lawa ezahlukene kusukela kuhulumeni kuya esimweni, kodwa ngokuvamile izidingo akucele ukuba okungenani ngezinga eneminyaka emine-accounting, ibhizinisi noma ensimini ahlobene KANYE kweminyaka emibili jikelele ezimali umsebenzi
Dlulisa emine kwesigaba CPA ukuhlolwa
Mina kakhulu ukuba eduze ukuphenya nezidingo isimo sakho phambi likhiphe CPA uhambo lwakho. CIAs NGOKUNGEFANI, abenza kuzwelonke eqinisekisiwe, CPAs kumele ukuthola ilayisensi sesifunda ngamunye abasebenza ngaphansi kwaso. Ngeke ukuchitha emhlabeni 5 iminyaka ukuthola impohlo yakho kanye / noma ze-master ukugcwalisa 150 imfuneko credit ihora ukuba abe CPA. Uma isimo sakho kudinga isipiliyoni somsebenzi, bese ufaka enye 2 iminyaka. I AICPA ivumela 18 izinyanga ukudlula ukuhlolwa CPA. Lokho bonke unezela kuze kufinyelele 8 ½ eminyakeni.
CIA ukuhlolwa kuyinto 100% ukubala ezisekelwe futhi siqukethe izingxenye ezintathu ahlukene:
ingxenye 1: Basics Lokucwaningwa
ingxenye 2: Lokucwaningwa Practice
ingxenye 3: Ukucwaningwa Kwangaphakathi Kwama- Ulwazi Elements
Ungathatha CIA ukuhlolwa nganoma isiphi isikhathi phakathi nawo wonke unyaka nganoma isiphi esinye 500+ Pearson Vue kugxile emhlabeni wonke. Ukuhlolwa inikezwa 16 izilimi, kufaka Arabic, isiShayina (bendabuko), isiZulu, French, German, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, isi-Korean, Polish, isiPutukezi, Russian, Spanish, Turkish, futhi Thai. Uma ilungu IIA, izindleko uhlole kuyinto $990. Non-amalungu kufanele ukhokhe intengo esigcwele $1,150, yingakho kubalulekile isikhathi sakho ukuba yilungu IIA. I ukuhlolwa CPA yakhiwa izingxenye ezine:
Audit Nobufakazi (AUD)
Lwezezimali Accounting kanye nokubikwa (FAR)
Ibhizinisi Wezemvelo Nemithombo Concepts (BEC)
Thanda CIA ukuhlolwa, the ukuhlolwa CPA kuyinto 100% ikhompyutha based. Nokho, it is kuphela iqondiswa nge Prometric Testing Centres ngesikhathi amawindi ezine izinyanga ezimbili unyaka wonke. Ukuhlolwa is hhayi ahlinzekwa ngoMashi, Juni, Septhemba noma Disemba. Lokho okwakudingeka ukuze kukhokhwe ukuhlolwa CPA kuyahlukana ngokuya isimo / yomthetho, kodwa ngokuvamile zokhahlamba kusuka $600 ukuze $800 ngoba zonke izigaba ezine.
ngokuvamile, CPAs uthole side kunaleso CIAs, kodwa konke lokhu kuncike isihloko somsebenzi CIA sika. Ezinye izici kungacacisa ukuthi i-CIA noma CPAs iholo, ezifana nendawo, isihloko, futhi oseneminyaka engu-eyonquma emholweni wakho. Umholo lesemkhatsini okwesikhathi CPA kuyinto $62,123 futhi $59,677 I-CIA. Okusanda sekube nesidingo kuqiniswa sezinga some kanye kokuhlolisisa anda., ukukhula umsebenzi ukwenza okuhle ngendlela engakholeki kokubili CIAs futhi CPAs.
Kunjalo, lokhu konke kuncike kulokho ofuna ukukwenza. Izitifiketi CIA kulula ukuthola kuka-CPA kusukela ukuhlolwa igxile 1 Isici esiyinhloko ezimali, kanti ukuhlolwa CPA kusekelwe 4. Uma ujabulele umsebenzi ngokuningiliziwe futhi aphenya, izitifiketi CIA ngabe iyalunga leya nto ngawe. Ngokolunye uhlangothi, a-CPA nabo bangenza umsebenzi kuhlaziywe kodwa amathuba amaningi umsebenzi ezindaweni kwezintela kanye nokubika, udala sokuqinisekisa ezihlukahlukene. Uma uthanda kuhlaziywe, intela, zokubika kanye somthetho, ke umzila CPA kungaba kuhle kuwe. Uma ufuna standout nakakhulu emhlabeni zezimali, ungaya kokubili! Ukuqala CPA uhambo lwakho, kufanele uqale ukucwaninga lokho Ukubuyekeza Yiqiniso kufanele usebenzise ukufunda ukuhlolwa. Lokhu kuyisinyathelo sokuqala enkulu! QHATHANISA TOP CIA UKUBUYEKEZWA COURSES
THOLA THE BEST CPA UKUBUYEKEZWA YEBO
Posted at 25 Mashi, 2018 16:31 PM Reply